Daawo muuqaalka: Risul wasaaraha DF ee Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe |
Daawo muuqaalka: Risul wasaaraha DF ee Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe
R/wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon iyo wafdi uu hoggaaminayo ee maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/Dhexe ayaa khudbad u jeediyay boqolaal dadweyne ah.
Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa waxaa socdaalkiisa ku wehliya wasiirka arrimaha gudaha iyo amaanka Qaranka C/kariim Xuseen Guuleed, wasiirka difaaca dalka C/xakiim Maxamuud Xaaji “Fiqi” xildhibaano ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kale.
markii ay gareen magaalada Jowhar R/wasaaraha ayaa waxaa loo galbiyay beer weyn oo ku talaa gudaha magaalada Jowhar halkaas oo khudbad uga jeediyay boqolaal dad weyne ah kuwaas oo qeyb ka qeyb qaadanaayay soo dhaweynta R/wasaaraha.
Mudane Saacid oo la hadlay shacabka ayaa tilmaamay in uu aad ugu faraxsan yahay booqashada uu ku tagay magaalo madaxda gobolka Sh/dhexe ee Jowhar waxa uuna intaasi ku daray in shacabka ku dhaqan ay yihiin shacab nabadeed.
Sidoo kale R/wasaaraha ayaa xusay in u jeedka socdaalkiisa uu yahay ka warqabka shacabka ay mas’uuliyada u hayaan si loo soo ogaado baahiyaha ay qabaan iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga hormariyo.